५ फिट ९ इन्च अग्लो हुनुहुन्छ? तपाइँमा हुनसक्छ दर्जनौँ यस्ता स्वास्थ्य समस्या… « Dainik Online
५ फिट ९ इन्च अग्लो हुनुहुन्छ? तपाइँमा हुनसक्छ दर्जनौँ यस्ता स्वास्थ्य समस्या…
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७९, सोमबार १२ : ५४
न्युयोर्कl के तपाइँ धेरै अग्लो हुनुहुन्छ ? एउटा पछिल्लो अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो भने अग्ला मानिसलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी दर्जनौँ समस्याको जोखिम हुन सक्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले अमेरिकाका २ लाख ५० हजार गोरा, अश्वेत पुरुष, हिस्पानिक र महिलाका १ हजारभन्दा बढी अवस्था अध्ययन गरेका थिए।
अनियमित रुपमा मुटुको धड्कन, पिडौंलामा नसा, स्नायुको क्षति र खुट्टामा अल्सरको जोखिम अग्लोपनसँग सम्बन्धित रहेको उनीहरूले पाएका थिए । ५ फिट ९ इन्च वा त्यसभन्दा अग्ला मानिसहरूमा छाला तथा हड्डी संक्रमणको जोखिम रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।
उनीहरूलाई रगत जम्ने, नशामा क्षति हुने र नङमा सङ्क्रमण हुने ठूलो जोखिम रहेको उनले बताएका छन् । रकी माउन्टेन रिजनल भीए मेडिकल सेन्टरका वैज्ञानिकहरू अग्ला मानिस किन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित हुन्छन् भन्ने बारेमा केही खुलाएका छैनन्।
रगत लामो दूरीसम्म पम्प गर्नुपर्ने र शरिरलाई स्वस्थ राख्न अनिवार्य मानिने रगत प्रवाहमा कटौती हुने एउटा सिद्धान्त छ । शरीरको धेरै मास बोक्दा हड्डी, मांसपेशी र खुट्टामा थप भार पर्न सक्ने, अनुसन्धानकर्ताहरू बताउछन् । तर, अग्ला मानिसमा मुटु रोग, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढीजस्ता जोखिम न्यून हुने उनीहरूको भनाइ छ।
उचाइ पहिले नै विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरूसँग जोडिए पनि यो उनीहरूको जीन वा आहार जस्ता अन्य कारकहरूको प्रभावको कारण हो भन्नेमा भने वैज्ञानिकहरू अनिश्चित छन् । अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले भीए मिलियन भेट्रान प्रोगाम नामक स्वास्थ्य डाटाबेस प्रयोग गरेका थिए । प्रोग्राममा २ लाख ८० हजार अमेरिकीको तथ्यांक समावेश थियो।
अध्ययनमा ९१ प्रतिशत सहभागी पुरुष थिए । अध्ययन पीएलओएस जेनेटिक्समा प्रकाशित छ । वैज्ञानिकहरूले स्वास्थ्य समस्या र उचाइबीचको नयाँ सम्बन्ध पनि पत्ता लागेका थिए । अग्लो मान्छेको हात तथा खुट्टामा पनि समस्या देखिने बताएका थिए । यस्तो समस्या बेलायतका १० जनामध्ये १ जनामा देखिन्छ।
सामान्यतया, अग्लो व्यक्तिहरू धेरै शारीरिक दूरीको कारण तिनीहरूको हात–खुट्टासँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित हुने उनीहरूको भनाइ छ।